ကိုKyawThetNaungတင်ထားတဲ့ပိုစ့်တစ်ခုထဲကလို ၉၀မျိုးဆက်တွေ·ရဲ့ သင်ကြားမှုအောက်မှာကြီးပြင်းလာကြသူတွေဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့သည်လည်း
ဒီလူတွေအကုန်လုံးက တွေးခေါ်မှုမရှိစဉ်းစားမှုမရှိ ပေးသမျှစာအလွတ်ကျက်၊ ကွာလဖိုင်းနဲ့ ခရစ်ဒစ်ထွက်ဖို့ မနားမနေကျက်၊ တစ်နေကုန် ရသမျှ အချိန်အကုန်နီးပါးကို ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ကျက်နေကြတယ်။
ဒီလူတွေက နောက်မျိုးဆက်ကိုဆက်ပြီး ပညာသင်ပေးကြရမှာတဲ့။
ကျောင်းဆရာလုပ်ကြရမယ့်သူတွေကိုယ်တိုင်က စာနားလည်ဖို့ သုံးသပ်ဖို့ လေ့လာဖို့ လုံးဝစိတ်ကူးမရှိ၊ ဆရာမကရှေ့ကနေ ပြောသွားသမျှ ရှင်းသွားသမျှ အမှန်ပဲဆိုပြီး လိုက်နားထောင် လိုက်ကူး လိုက်ကျက် ဒီလောက်ပဲ။
တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ ပညာရေးက အရေးကြီးပါတယ်။
ခက်တာက အဲ့ဒီပညာရေးကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အင်အားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်က လက်ရှိပညာရေးကိုပဲ အကောင်းထင်တဲ့ အဲ့ဒီပညာရေးစနစ်ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ စာသင်တဲ့စက်ရုပ်တွေ ဖြစ်လာကြတော့တာပါပဲ။
(ရှေ့ကစာသင်နေတဲ့ ဆရာမက အမှန်ပြောနေတာလား အမှားပြောနေတာလားကိုမသိတဲ့အထိပဲ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းဆရာလောင်းတွေ ညံ့နေကြတာလား ဒါမှမဟုတ် ဆရာမ မှားတာကိုထောက်မပြရဲတာလား ဒါမှမဟုတ် ဆရာမ မှားရင်ထောက်မပြကောင်းဘူးဆိုတဲ့ ဂျင်းကြီးပဲ စားနေကြတာလား။
ကျွန်တော်ထောက်ပြတုန်းကတော့ တစ်တန်းလုံးကျွန်တော့်ကိုဝိုင်းလှောင်ကြတာပါပဲ 😀)
အဓိကပြောချင်တာကတော့ ပညာရေးစနစ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် အဓိကကျတဲ့ ကျောင်းဆရာ ဆရာမလောင်းတွေကို အရင်ဆုံးပြင်ပေးကြပါလို့.....
Myanmar, Kalay Township
このチャンネルのテーマ ・人生で役に立つ良書を紹介する ・人生の深い内容を投稿する ・人間の心理を考える ・士君子になる 人の心と人生を探求する心理学・哲学寄りのチャンネルです。 興味があればぜひ見てください。
So my thoughts about the future of SOL? They'll more than likely never let you earn SOL like they did in the past.. Most likely they will implementapay to play strategy in hopes to increase the value of their already in the ground coin. It may work to increase the value but it'll ruin the economics for those who dont pay. Another idea could be "feature channels" or "featured profiles" Poll ->
605 triple spin off of the ufo in favela spinning in the air hit maker your mom then fuk ur mom throwing knife at the wall no scope 360 triple headshot silent shot xXxUrDoNeKidxxx ur mom while playing pokemon then pull out my m9 and shoot ur mom then spaghetti everywhere ur done m8. next round of search and destroy i see you trying to run f*ck that kid im jumping off the airplane on terminal get another hit maker off of ur mom slaped ur moms face with my dick knock her out shes fainted like the pokemon i was playing with earlier 890 degrees 1080 headshot collateral on the whole xbox party including you round over our team won ur gettin delete off of the leader board kid ur f*cking done... boom